Ny fametrahana an-tsoratra ho an'ny Stainless vy multistage centrifugal paompy - China Shanghai Søg paompy
Ny fametrahana Notes for Stainless Steel Multistage Centrifugal Pump:
1. Avy amin'ny Stainless vy multistage centrifugal paompy fametrahana ny teknolojia, ny sodina suction mitaky henjana toe tombo-kase, tsy afaka ny hanana na sodina mandefa leakage, Raha tsy izany dia hanimba ny banga teo amin'ny rano ambaratonga Inlet ny paompy, hampiverina ny paompy rano output dia mihena, na dia lehibe loatra hantsaka rano. Noho izany, dia tsy maintsy mafy manao asa tsara eo amin'ny interface tsara ny fantsona mba hiantohana ny fananganana fantsona kalitaon'ny fifandraisana.
2. Tokony ho marihana fa rehefa ny lohany sy ny rano mari-pana ny Stainless vy multistage centrifugal paompy sy ny fametrahana fantsona centrifugal paompy dia tsy mitovy amin'ny fanandramana fepetra, raha ny eo an-toerana isam-ponina dia 300 metatra mahery na ny pumped rano mari-pana Mihoatra 20 mari Celsius, sarobidy ny kajy dia ahitsy. Izany hoe, ny rivotra tsindry amin'ny haavony samy hafa sy ny zavona tototry tsindry ambonin'ny rano mari-pana amin'ny degre 20 Celsius.However, raha hafanana ny rano dia 20 degre Celsius ambanin'ny, tototry etona ny tsindry mety ho tsinontsinona.
3. Mba hanamarinana ny paompy fametrahana haavon'ny (izany hoe suction). Izany dia manondro ny hahavony mitsangana elanelam-potoana eo anelanelan'ny rano ambonin'ny sy ny afovoany-tsipika ny paompy impeller. Tsy maintsy tsy hafangaro amin'ny allowable suction avo. Ny haavon'ny banga nahazo rano tamin'ny paompy ny vokatra elucidation boky na nameplate manondro ny banga amin'ny Inlet sarobidy fizarana ny paompy rano. Ary nisy refesina amin'ny alalan'ny fanandramana nijanona ny rivotra ara-dalàna eo ambany fanerena sy ny rano mafana ny 20 degre Celsius. Tsy mieritreritra momba ny fikorianan'ny rano rehefa afaka ny suction sodina no mifanentana. Ny haavon'ny ny paompy sampana eo an-toerana dia tokony ho zava-dehibe ny sisa tavela rehefa mamela ny banga haavon'ny ho nakòn satria very ny suction tsipika ny suction sodina. Ny haavon'ny ny paompy rafitra tsy afaka mihoatra ny kajy sarobidy. Raha tsy izany, ny rano, dia tsy mba fenoy paompy izy.
4. Ny fiantraikan'ny ny kajy vidy no loha -loss noho ny sodina fanoherana ny suction sodina. Noho izany, dia tokony hatao ny hanaraka ny fandaharana TAPAKA FANTSONA fohy indrindra, ary mametraka ny kiho Fittings araka izay azo atao. Ihany koa araka ny tokony heritreretina koa ny handamina ny fantsona sasany calibers mba hampihenana ny fikorianan'ny tahan'ny ao amin'ny fantsona.